Qeybta 1: Maxaad inuu ka soo kabsado Samsung Data?
Qeybta 2: siyaabo rasmiga ah - Samsung xal kabashada
Qeybta 3: kabashada xogta Best Samsung --_ 1_698_1_ Dr. Fone u Android
Waxaa jira jawaabo badan oo suurto gal ah in su'aashan ah iyo meesha ugu sahlan mid ka mid ah oo dhan waa in ay xogta la khasaaray sabab u ah oo ay tahay in dhalashada qofku ka bogsado ma aha oo kaliya xogta, laakiin sidoo kale waa inuu xaqiijiyo in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin arrintan la xiriira marka ay timaado waxkaqabasho. Kuwa soo socda waa saddex sababood ee ugu waaweyn oo keeni in xogta soo kabsado farsamo iyo codsiga.
i. Baadi Human
Waa arrinta ugu horrayn waxa weeyi in ay keenaysaa in ay arrintan iyo user wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in xogta la soo kabsaday kasta oo dib u dhac iyo musiibooyinka dheeraad ah aan. Sidoo kale waa in la ogaadaa in ay jiraan domain sub kala duwan oo hoos yimaada cinwaanka isku mid ah iyo keenaysaa in natiijada in ay yihiin aan la qiyaasi karo oo sidaas daraaddeed kabashada xogta in Samsung ay noqoto dhalashada. Xogta waxaa sidoo kale la tirtiro si shil ama waa qalad aadanaha qaar ka mid ah geeddi-socodka, jidkuna waa arrimaha la xiriira arrintaas. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in hababka saxda ah waxaa laga dalbadaa in arrintan la xiriira in aan kaliya keeni natiijada cabsi badan, laakiin sidoo kale hubin doona in xaalada ayaa ah mid aan marnaba ballaadhiyaa sameeyo.
ii. Qalad farsamo
Mashiinka waa la isku halayn karo oo aan lagu kalsoonaan karin waqti isku mid ah taas oo ka dhigaysa in uu hubiyo in xogta la ilaaliyo oo aan la ilaaliyo sidoo kale. Arrinta kale ee keenta in soo kabashada xogta waa xaqiiqda ah in ay jiraan qaar ka mid ah qalad farsamo taas oo lagaga xayuubiyay oo sidaas daraaddeed tallaabooyin ka hortag ah sidaas darteed waa lagama maarmaan in arrintan la xiriira. Tani waa nooca daran ee factor khasaaro xogta taas oo ka dhigaysa hubiyo in xogta ay tahay irrecoverable mararka qaarkood, laakiin ay sabab u tahay gobolka codsiga tahay geeddi-socodka waa bari si loo hubiyo in arrinta la xalin iyo dhibaatada la saxo ugu dhaqso badan.
iii. Isticmaalka farsamooyinka qaldan
Waxaa sidoo kale codsatay in ay arrimo kala duwan oo keeni khasaaro xogta. Marka ay timaado in Samsung markaas sababta ugu weyn ee ay dhibaatadu tahay xaqiiqda ah in xogta la soo guuriyeen ama wareejiyay oo aan wax processing habboon iyo farsamo taas oo horseedaysa arrimaha iyo dhibaatooyinka. Waa arrin aad u muhiim ah in la ogaado in user waa in codsan habab ku haboon si loo hubiyo in arrinta ma kici doona oo xitaa markaas haddii arrinku sidaas yahay markaas waa in user inay hubiyaan in dhibaatada la saxo by codsanaya gobolka farsamooyinka tahay dhigi.
Waa mid ka mid ah ugu waaweyn oo gobolka ka mid ah siyaabaha tahay in la hubiyo in arrinta la saxo si keeneysa in xalka waxa taageeray technology cajiib ah Samsung arrintan la xiriira ka.
Waa maxay Samsung xal kabashada?
Waxaa loo arki karaa mid ka mid ah codsiga ugu muhiimsan oo muhiim ah oo ay jirto in si loo hubiyo in arrinta la xalin macaamiisha in ay la kulmi dhibaatada soo gaartay xogta. Waxaa ku jiraa Laptop iyo computer kasta Samsung oo sidaas daraaddeed buu u hubiyaa in drive adag la soo celiyo si hore iyo taageeray version arrintan la xiriira. Dawladdu waxay mid ah qaababka tahay codsiga waa cabsi badan laakiin khasaare mid kaliya in app waxaa loo isticmaali karaa nidaamka Samsung oo kaliya sidii ay u heli aagga soo kabashada Samsung oo kaliya. Waa goob drive adag Samsung waa laga dugsado iyo files gurmad waxaa halkaas sameeyey si toos ah gudahood. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ay u baahan tahay in la hubiyo in codsiga waxaa loo isticmaalaa in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah.
Download Samsung xal kabashada
Waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in user waa in la hubiyo in codsiga la soo bixi sameeyo haddii aanay hore u jiraan nidaamka sameeyo. Si aad u hubiso in codsiga la soo bixi user waa in la hubiyo in ka dhigi url ah waxaa la socda sida tan ay tahay xalka ugu wanaagsan ee dib u soo kabashada ee Samsung oo version waxaa sidoo kale updated si loo hubiyo in ugu fiican ayaa soo bixi arrintan la xiriira.
Sida loo isticmaalo Samsung xal kabashada
Waa in la ogaadaa in user a waa in ay hubiyaan in nidaamka codsiga ugu fiican waxaa la socda si aan kaliya arrinta la xaliyey laakiin user sidoo kale uu helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira waxaad ka dhigi doontaa. Ka dib waa habka ah in la raaco si aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ee:
1. Jidka in la raaco waa Start> Dhamaan barnaamijyada> Samsung xal kabashada si interface u muuqdo:
2. user ayaa markaas u baahan yahay inuu riix badhanka soo celiyo si loo hubiyo in talaabooyinka horukaca ee habka iyo doorasho ee aasaasiga ah waxaa loo soo celiyo doortay:
3. user ayaa markaas u baahan yahay inuu riix badhanka soo socda iyo barnaamijka ay bilaabi doonaan in ay ka shaqeeyaan gaar ah maadaama ay s is iswada:
4. Barnaamijku wuxuu ku weydiin doona inay dib u nidaamka si ay u qabtaan aasaasiga ah ee soo celin processing:
5. Barnaamijka waxaa loo hubiyo in nidaamka la soo celiyo bilaabo dhigi doonaa:
6. Nidaamka waa in la billaabeen mar kale si loo hubiyo in nidaamka la dhammeeyo:
Wondershare Dr.Fone for Android (Kabashada xogta Android)
Xaaladdan oo xogta aad lama beehsa iyo aad lumiso, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone for Android. Waa mid ka mid ah software ugu wanaagsan ee dib u soo kabashada heli karaa internet-ka. Waxa kaliya ma ahan kabanayso xiriirada lumo ama la tirtiro, fariimaha qoraalka ah, sawiro, farriimo WhatsApp, files audio, videos oo dheeraad ah, laakiin waa mid aad u fudud in ay aad u isticmaalaan.
Waa maxay Wondershare Dr. Fone u Android?
Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah mashaariicda farshaxanka kuwaas oo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo aan lahayn dhisay looga baahan yahay software waxaa ku jira in nabadeeyaan user ee arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira waa in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi website-ka rasmiga ah ee shirkadda si version waa daahir iyo updated sameeyo. URL waa tan oo waxaa la siiyaa si loo hubiyo in user marnaba gasho kaaftoomi ee raadinaya barnaamijka internetka.
Download Wondershare Dr. Fone u android
Si aad u xaqiijiso in barnaamijka la soo bixi ka dhigi halkan sidii loo kor ku soo sheegnay iyo user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in file exe la soo bixi rakibay oo user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka by socda .Waxaa interface barnaamijka barnaamijka waa sida soo socota:
Sida loo isticmaalo Wondershare Dr. Fone u android
Geedi socodka waa in la raaco arrintan la xiriira waa sida soo socota iyo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in la raaco iyada oo aan gefo talaabo kasta oo ay u sii wadi:
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi, bilaabay oo ay maamulaan ka url ah in ay sii wadi:
2. Marka telefoonka ayaa ku xiran user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in debugging USB ah waxaa sidoo kale karti iyadoo la kaashanayo sawirka hoos ku qoran:
3. button xigta waa in markaas la sii adkeeyey si aad u hubiso in telefoonka la falanqeeyay,
4. user waa in markaas hubiyo in nooca file iyo habka scan lagu doorto:
5. user waa in markaas loo hubiyo in files lumay waxaa lagu falanqeeyay iyo kuwa loo baahan yahay waa la soo celiyay ka baxayaan ama inta ay qubaan dadka kale:
> Resource > Samsung > 2 Siyaabaha Ma Samsung Data Recovery inaad barataa